ခုနှစ်စင်ကြယ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Thutazone
ခုနှစ်စင်ကြယ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ
By ThutammPosted on January 9, 2018 December 31, 2018
Post By Ko Kyel Sin(ဗဟုသုတကြယ်စင်ဂရု)
ခုနစ်စဉ်ကြယ်ကို ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ သိကြပါသည်။ “ခုနစ်​စဉ်​ကြယ်​​ပြောင်​ အမြီး​ထောင်​ သန်း​ကောင်​ချိန်​သို့​ရောက်​” ဟု ​ရှေးလူကြီးများ ဆိုစမှတ်​ပြုခဲ့ကြပါသည်​။ မြောက်ဘက်ကောင်းကင်ယံတွင် အလွန်ထင်ရှားသော ကြယ်အစုအဝေး ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ခုနစ်စဉ်ကြယ်သည် မြန်မာဂဏန်း (၇) နှင့် ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် အလွန်ပင် နီးနီးစပ်စပ် တူညီသည့်အတွက် ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်ဟု ထင်မိပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့က ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ကြယ်များကိုလည်း ဦးခေါင်းဘက်မှ စတင်၍-
၇။ တနင်္လာကြယ် – ဟု အစဉ်အတိုင်း ကြယ်တစ်လုံးစီကို အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။
အတိုကောက်အားဖြင့် နေ့သင့် နံသင့် လင်္ကာဖွဲ့၍လည်း အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ လင်္ကာမှာ-
“မ,စက်,တတ်,လေ၊ သည်း,အူ,ကြွေ၊ ​ရေလေအစ ဦးခေါင်းက”
-ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ​နေ့သင့်နံသင့် ပြန်ဆိုကြည့်ပါက အထက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြယ်များ၏ အမည်ကို ​တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။
ခုနှစ်စဉ်ကြယ်သည် ကြယ်ခုနှစ်လုံး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကြယ်စုဟု ဆိုသော်လည်း အမြီးစွန်းမှ ဒုတိယမြောက်ကြယ်သည် နှစ်လုံးတွဲနေသောကြောင့် အမှန်စင်စစ် ကြယ်ပေါင်း ရှစ်လုံး ပါဝင်နေသည်။ ရှေးမြန်မာတို့သည် ဤ ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ကို မိချောင်း တကောင်အသွင် တွေ့မြင်ခဲ့ကြသောကြောင့် ကြယ်မိချောင်းဟုလည်း ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
ခုနှစ်စဉ်ကြယ်တွင် ကြယ်ပေါင်း ရှစ်လုံး ပါဝင်ပြီး မိချောင်းနှင့်လည်း တူသောကြောင့် “ခုနှစ်စဉ်နှင့် ရှစ်စဉ်ကြယ်ကောင်း၊ ကြယ်မိချောင်း၊ ခေါင်းကား ဦးဆောက်၊ မြင့်မိုရ်အောက်သို့ ရောက်ပြီလေ”ဟု ခုနှစ်စဉ်ကြယ်သည် မြင့်မိုရ်နဂါးကြယ်စုရုပ် အောက်သို့ ရောက်ရှိနေပုံကို စပ်ဆိုထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်မည်။
ခုနှစ်စဉ်ကြယ် အမြီးစွန်းမှ ဒုတိယမြောက်ကြယ်ကို မြန်မာတို့က တနင်္ဂနွေကြယ်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အနောက်တိုင်းက မိုက်ဇာဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုသည်။ ထိုမိုက်ဇာနား ကပ်နေသည့် ကြယ်ကလေးကို အနောက်တိုင်းက အယ်လကော ဟု ခေါ်ကာ ဟိန္ဒူတို့ကမူ အရုန္ဓတီဟု ခေါ်သည်။ မိုက်ဇာနှင့် အယ်လကောတို့ကို မြင်းနှင့် မြင်းစီးသူဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။
မျက်မှန်နှင့် မျက်စိ စမ်းသပ်သော ကိရိယာများ မပေါ်ပေါက်သေးမီ ရှေးလွန်လေပြီးသော အခါသမယက အယ်လကောကြယ်ကို မျက်စိ ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်း တမျိုးကဲ့သို့ပင် အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ ထိုကြယ်ကို မြင်ရလျှင် မျက်စိကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အယ်လကော ခေါ် အရုန္ဓတီ ကြယ်ကလေးသည် မိုက်ဇာ ခေါ် တနင်္ဂနွေကြယ်နှင့် တလက်မမျှသာ ကွာသည်ကို ဂရုပြုကြည့်ပါက တွေ့မြင်ရသည်။
ခုနစ်စဉ်ကြယ်မှာ အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒ ဆရာများအလို အားဖြင့် အာစာမေဂျာခေါ် နက္ခတ်ထဲတွင် ပါဝင်သော ကြယ်စု ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ခုနစ်စဉ်ကြယ် ဟူ​သော အမည်​အပြင်​ အချို့​နေရာများတွင် ကြယ်ရေမှုတ်၊ ကြယ်မိချောင်း စသည်ဖြင့် အခေါ်အဝေါ်များလည်း ရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန်လူမျိုးများ အမြင်တွင်မူ ယင်းကြယ်​စုကို ဟင်းခတ်သည့် ယောက်ချိုဇွန်းကြီး ပုံသဏ္ဌာန် ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့အတွက် ယောက်ချိုဇွန်းကြီး (Big Dipper) ဟု ​ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကမူ ခုနစ်စဉ်ကြယ်၏ အမြီးကို လက်ကိုင်အဖြစ် မြင်​၍ ခုနစ်စဉ်ကြယ်ကို ထယ်သွားပုံအဖြစ် မြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ယင်းကြယ်အတွဲကို ထယ် (Plough) ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် အနောက်တိုင်း နက္ခတ္တဗေဒပညာတွင်လည်း ခုနစ်စဉ်ကြယ်ရှိ ကြယ်ခုနစ်လုံးကို အမည်များ ပေးထားခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ အထက်ပါအတိုင်းပင် ခုနစ်စဉ်ကြယ်၏ ဦးခေါင်းပိုင်းမှ စတင်ပါက-
1. ဒို့ဘ်ဟာ့ခ်ျ (Du bhe) DOOB-huh ၊
2. မားရက်ခ် (Merak) MER-ak ၊
3. ဖိဒါ (Phecda) FEK-da ၊
4. မက်ဂ်ရက်ဇ် (Megrez) meg-REZ ၊
5. အယ်လီအို့သ် (Alioth AL-lee-oth) ၊
6. မီဇာ (Mizar MYE-zahr) နှင့်
7. အယ်လ်ကိတ်ဒ် (Alkaid) AL-kade တို့ ဖြစ်ကြသည်။
(ကွင်းများနောက်တွင် အသံထွက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။)
အမှန်အားဖြင့် ခုနစ်စဉ်ကြယ်ပါ ကြယ်ခုနစ်လုံးသည် ကမ္ဘာမှ တူညီစွာ ကွာဝေးသော ပြင်ညီတစ်ခုတည်းတွင် တည်ရှိနေကြသည်တော့ မဟုတ်ပေ။ ပါဝင်သော ကြယ်တစ်လုံးစီသည်​ ကမ္ဘာမှ အကွာအဝေးချင်း မတူညီကြသကဲ့သို့ ပြန့်ကားနေသော စကြ၀ဠာသီအိုရီအရ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ​ဝေးရာသို့ အလွန်လျှင်မြန်သော နှုန်းနှင့် ရွေ့လျားလျက် ရှိ​နေကြသည်။
၁။ ဒို့ဘ်ဟာ့ခ်ျ ကြယ်သည် ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် (light year) (၁၀၅) နှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
၂။ မားရက်ခ် သည် အလင်းနှစ်​ (၇၈) နှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
၃။ ဖိဒါကြယ်သည် အလင်းနှစ် (၉၀) နှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
၄။ မက်ဂ်ရက်ဇ် သည် အလင်းနှစ် (၆၃) နှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
၅။ အယ်လီအို့သ်သည် အလင်းနှစ် (၆၈) နှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
၆။ မီဇာသည် အလင်းနှစ် (၂၁၀) နှစ်တွင် လည်းကောင်း
၇။ အယ်လ်​ကိတ်​ဒ်​သည်​ အလင်းနှစ်​ (၂၇၈) နှစ်​တွင်​လည်း​ကောင်း အသီးသီး တည်ရှိနေကြ​လေသည်။
ခုနစ်​စဉ်​ကြယ်​၏ တည်​​နေပုံမှာ အမှန်​တကယ်​လည်း ထယ်​နှင့်​တူ​ပေသည်​။ ထယ်​လက်​ကိုင်​ရိုးနှင့်​ တူ​သောအပိုင်းတွင်​ ကြယ်​ ၃ လုံး ရှိသည်​။ ကျန်​ ၄ လုံးမှာ ကြယ်​ ၃ လုံးထိပ်​၌ ကန့်​လန့်​ဖြတ်​ ၂ လုံးစီတွဲလျက်​ ၂ တန်းရှိသည်​။ အစွန်​ဆုံးကြယ်​ ၂ လုံးတွဲအတန်းမှ ​ရှေ့သို့ မျဉ်း​ဖြောင့်​တစ်​ခုကို ဆွဲလိုက်​လျှင်​ ထိုမျဉ်း၏အဆုံး၌ တစ်​လုံးတည်း ​တောက်​ပ​နေ​သော ဓူဝံကြယ်​ကြီးကို မြင်​ရ​ပေလိမ့်​မည်​။
​မြောက်​ဘက်​​ကောင်းကင်​ရှိ ကြယ်​တာရာများသည်​ ဓူဝံကြယ်​ကို လှည့်​ပတ်​၍ ​နေသဖြင့်​ ခုနစ်​စဉ်​ကြယ်​သည်​လည်း အလားတူပင်​ အချိန်​နာရီနှင့်​ ရာသီဥတုအလိုက်​ ​ရွေ့လျား​ပြောင်းလဲ၍ ​နေ​ပေသည်​။ ​ဆောင်းဥတု ညဉ့်​ဦးပိုင်းတွင်​ ထယ်​လက်​ကိုင်​ရိုးနှင့်​တူ​သော ကြယ်​ ၃ လုံးတန်းသည်​ ​တောင်​ဘက်​သို့ ညွှန်​လျက်​၊ ​နွေကူးဥတု ညဉ့်​တွင်​မူ အ​ရှေ့ဘက်​သို့ ညွှန်​လျက်​၊ ​နွေဥတုတွင်​ ​မြောက်​ဘက်​သို့ ညွှန်​လျက်​၊ ​ဆောင်းဥတုတွင်​ အ​နောက်​ဘက်​သို့ ညွှန်​လျက်​ ​နေ​ပေလိမ့်​မည်​။
Previous post ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဆင်းတုတော် ၁၀ ခု
Next post ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးမှာ ထိပ်တန်းဖြစ်ရခြင်း အချက်တချို့